के तपाई दमको रोगी हुनुहुन्छ ? के खाने के नखाने भन्ने जानकारी थाहा पाई राख्नुहोस्
सेप्टेम्बर 27, 2019 सेप्टेम्बर 27, 2019 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment डा. राम बहादुर बोहरा, दम, रोग
दमको रोग दीर्घकालिन रोग भन्दा खासै फरक छैन । आज हामीले यस्ता रोगीले के खाने नखाने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौं । दमको रोग नभई अन्य रोगको लक्षण हो भनिएको छ । दमको विषेश गरि एलर्जीयुक्त खानपानले दम फुल्ने गरेको हुन्छ ।
यो रोगमा श्वासनली वा वरिपरिको जोडिएको खण्ड सुन्निन्छ। यस कारणले फोक्सोमा हावा जान कठिनाइ हुन्छ । जतिखेर एलर्जी उत्पन्न गर्ने खालका तत्त्व र इरिटेटस (अप्ठयारो उत्पन्न गर्ने तत्त्व) सास नलीको सम्पर्कमा आउँछन्, त्यसपछि सास फेर्न समस्या हुन थाल्द छ त्यसैलाई नै दम भन्दछन् ।
दमको रोग एउटा बंशाणुगत कारण पनि एक मानिएको छ। यदि यो रोग परिवारका अग्रजलाई यो रोग लागेको भए हुने आशंका बढी हुन्छ। दम हुने अर्को कारण पनि छ । वातावरणका एलर्जन्स वा इरिटेटसप्रति बढी सम्वेदनशील व्यक्तिलाई पनि दम हुन सक्छ । उमेरसँग दमको कुनै सम्बन्ध छैन । यो कुनै पनि उमेरमा हुन सक्छ।
दम यस्तो स्थिति हो, जसले फोक्सोको हावा भित्र-बाहिर गर्ने नलीलाई प्रभावित गर्छ । दममा हावाको नलीको चारैतिर भएको मांसपेशी संकुचित हुन्छ र खुम्चिन्छ । यसले सास फेर्न गार्‍हो हुन्छ । यसले हावाको नलीमा जलनसमेत हुन्छ । दमको रोगीले खानपानमा विषेश ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यस्ता खाद्य पदार्थ खानुभएन जसले एलर्जी पैदा गरोस् ।
आजको लेखमा हामीले दमको रोगीले के कस्ता खाना खानाले ठिक हुने र के कस्ता खानाले उनलाई असर पुग्ने विषयमा जानकारी पस्कने छौं । पढ्न र सेयर गर्न नभुल्नुहोला । दमको रोगीले हमेसा एलर्जी पैदा गर्ने खालका खानाबाट बच्नु पर्दछ ।
दमको रोगीले खान हुने र नहुने कुराहरु
१. दमको रोगीले मह र लहसुन उपयोगी छ । सकिन्छ भने हप्तामा एकपटक बर्त बस्नु राम्रो भनेको छ ।
२. श्वास दमको रोगीले भिटामिन सी प्रशस्त खानु पर्दछ । यस्ता रोगीले दैनिक १५०० मि.ग्राम दिनमा ३ पटक खानापछि लिनुपर्छ ।
३. दमको रोगी Constipation बाट बच्नुपर्छ । दैनिक ८,१० ग्लास पानी पिउनु पर्छ ।
४. धुलो धुवा र दुम्रपान बाट बच्नु पर्दछ ।
५. पौष्टिक खाना खानु पर्दछ ।
नोट : एलोपैथिकका डाक्टरको भनाईमा दमको कुनै स्थायी औषधि नभएको मान्यता छ । तर दमको रोगको प्रखुम कारण एलर्जी भएको हुनाले यस्ता वस्तुबाट बच्नु सवैभन्दा राम्रो उपचार मानिएको छ ।
← NTC को नेटवर्क नहुँदा NCEll लाई मारामार फाइदा
आयुर्वेदिक औषधि निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु →
नोभेम्बर 1, 2018 जनवरी 6, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1
फूड पोइजनका कारणहरु र उपचार
One thought on “दमको रोगीले के खाने के नखाने ?”
Pingback:यसरी गरौ दमको रोगको हर्बल पद्धतिवाट उपचार विधि, जानी राख्नुहोस्
दैनिक भोजन गर्ने खानेकुराहरुको फाईदा